Tajjaajilii Taxi Finfinnee Afaan Oromoottin - Caboowanci.com-Oromia
Tajjaajilii Taxi Finfinnee Afaan Oromoottin
March 24, 2016 Nadhani	5 Comments OLF, OMN, Oromia, SBO
Tajjaajilii Taxi Finfinnee Afaan Oromoottin jalqabamee jira. Abbaan qabeenyaa min bus taxi magaala Finfinne keessati hojjachaa ykn tajjaajila kennaa jiran kun akka jedhanitti, gargaaran issaaniifi walii galtee ummuudhaan Afaan Oromoo ittin fayyadamittoota issanii ykn customer issaanii akka tajjaajilaa jiran beekamee jira. Asi irrati bakka itti deeman ykn itti imalaa jiran yeroo beekisiisan maqaa dhuma yeroo ammaattin waamamuu akka fayyadamaa jiraniifi gara fuunduraati qaaminni dhimmi kun illalatuu wajjin ta'anii akka maqaa Oromoo bakka Finfinne keessa jiran jijjirame sana bakk isaatti deebisanii ummata akka barisiisan waamicha goonaafi jedhu. Amma garuu piyyasaa piyyasaa, markatoo markatoo jechaatuma waamaa jira jedhu.
Sababa kanaan kan ka'ee ilee kan ka'ee poolicii qaama mootummaa fi namoota afaan kana jibbban wajjin nu jidduu itti walitti bu'iins guddaan ummamee ture jedhu abban qabeenyaa Taxi kanaa.
Namoonii akka keenya Taxi kana hojjachaa jiraniifii namoonii tokko tokko yeroo nuti afaan Oromootin " Baga nagaan dhufitan koota seena ", Gara Lagahar deeminna achii irraan gara Bole deeminna jenne fayyadamitoota keenyaa afaan keenyaan waamaafii itti himaa jirutti, waan hin taaneefi afaan hojjii Orominyaa mitti maaf akkas jette ? Dhiphummaa kana gara Taxi irratis ittin as baatanii ? jedhu. Ha ta'uu malee nuti jechaa isaanii tuffanneetumma bira dabarree hojjii keenya hojjatanna. Kan nama ajja'ibuu yeroo nutti afaan keenyaa waammannee jennu daqiiqaa tokko keessatti namoota ykn itti fayyadamitoota guuttannee karaa keenya jalqabinna. Warii kaan garuu daqiiqaa 5 amma 10 keessati illee nama argatanii guutatanii hin deemman. Keenyaa yeroo afaan kanaan waaminne guuttannee deeminnu fayyadamitoonii keenyas bayyee gamadaa afaan issaanittin fayyadamaa bakka isaan barbadaniitti bu'uu. Galiin keenyaa illee dabaalaa deemee, namoonii illee kaka'umisa argatanii jiru nu jajjabeessa jiru jechaa jiru abban qabeenyaa kun.
Garuu darbee darbee Poolisoonii mootumma kun kaayyoon keessan maaliidhaa maaf ummata addaan babaasaa jirittu afaan kana gargaaramaa jedhannii hojjii keenyaa irrati illee yeroon dhiibbaa umman ni jiru. Haa ta'uu malee nu ittis yeroodhaa kan itti falmachaafii amanisiisaa jirru, nutti qooqqinii keenyaa afaan Oromooti afaan amaara kana hin dandeenyuu yeroo afaanuma kanaan cacabisinnee hojjanuu ykn dubbannu nutti kolfuu nu harrabisuu kun moo wal qixxummaa afaan keenyaa irrati dhiibaa umuu hin qabuu nutti biyya keenyaa keessatti qooqa keenyaan afaan keenyaan hojjannee jiraanna malee ergaa biraa hin qabinnu jenneetti falmachaa jiraa. Asi irrati kan galateefachuu barbaduu policii Oromoo tokko kan taatee maqaan ishii Balayinesh Gabissa dhalatuu aanaa Jaldu dhaa bayyee nu gargartee yoo rakkoon tokko gara fuunduraatti isn quunamme jettee bilbila ishii nuuf kenittee bayyee nu gargartee galata guddaa qabiddi naminii kun kan saba ishiittif dhaabatee jedhu ishii galateefachuu barbaduu.
Abbaan qabeenyaa Taxi kana yeroo jedhanitti amma torbaan tokko keessati haalii isaa jijiramee wayyaalonnii ykn gargartuun taxi afaan Oromootin yoo waamani malee taxin isaan dafee hin guutamuu ykn itti fayyadamitoota dafanii argachaa hin jiranii. Ijjoolii afaan Oromoo danda'an maalaqa xiqqoo kanfallanii waamisiisuu jedhuu abbaan taxii kanaa.
Asi irratis kan waa na yaadachiisee tokko qoqqobbiin mootummaa wayyannee irraan gahaa jiramuu fuula issa jijiiratee, toofitaa haaraa fi adda ta'een ummanii qabissa'aa akka jiru beekame jira. Ammas yoo ta'ee hojjiin Taxii kana akkaataa kanaan qabisa'nii bu'aa lakkooofissa hin qabinnee fi maalaqatti hin shalagaminnee hojachaa ykn hojjatamaa jira. Kana irraa yoo xiqaate waan lama baranna. 1ffaa, afaan , aaddaa, enyummaa ofi finfinne keessatti babalidhsuu. 2ffaa, maalaqinii ykn baasiin sabnii oromoo finfinnee keesa jiru baasu kan itti dhaquu saba issa ykn lamii oromoo tokko bira malee diina issa bira mitti kan deemuu. Karaa biraati Oromoo dhumatuu wal irra bita wal itti gurgura gara business ittin illee wal jabeessa deema company lamii oromo hin taane dhadhabaa deema jechadhaa. Kanaafuu haaluma akkanaatin qabissoo keenya haa jabbeefannu jabaadha.
← Ejanisiin Meetroolojii Biyyoollessaa Akkeekkachiisee..
Barattuu Oromoo Wagaa 8 Beela Irran kan Ka’ee Gaggabidde →
5 thoughts on “Tajjaajilii Taxi Finfinnee Afaan Oromoottin”
Hujii cimee itti fufuu qabuudha.akkasumas hujii boonsaa saba keenyaa waan ta’eef bakka hundatti abal’atee cimee hujii irra oolu qaba .qabsaayaan qabsoo kana eegalte galata guddaa qabda.galann keessaan bilisummaa haa ta’u.
100% nan deeggara!! galatoomi kunis tooftaa qabsooti!
Kunii kaaralee nuutii afaanii addaa Fi enyumaa kanaa ibsaanuuii kesaa isaa tokkodhaa. Waanii naagamachiisee kessaa tokko yoo namoonii afaanii oromoonii wamichaa godhaanii gutaataa daadaafaa demaanii kuwooleenii dabachuunii suunii nuufii bua gudaadhaa because asiin duraayuu malaqumaa kenyaanii gudaatanii hadhaa nuutufaataanii. Garuu wonii namoonii afaanii oromoonii hojaatanii beekuu qabaanii hangaa nuutii dubaatii hafnee osoo afaanii namaa guddisufii fignuu. I fully agree with this idea. I’ll also encourage all taxi drivers to keep doing it
kun wanta baay’ee gaarii ta’eefii wanta akka laayyootti ilaalamuu hin qabnedha; kanaafuu kanneen biroofillee fakkeenya gaarii ta’ee akka itti fufanin jedha. warri jalqabdan immoo galanni keessan hammana kan jedhamu miti. horaa bulaa.